महिला हिंसा: दोषी को ? महिला या पुरुष ?-NepalKanoon.com
महिला हिंसा: दोषी को ? महिला या पुरुष ?
घरमा बुहारीलाई सासुले सताउँदा दोष लोग्नेले पाउँछ । नन्दले भाउजू सताउँदा नि दोषी लोग्ने नै हुन्छ । आखिर महिला माथि हुने हरेक हिंसा पुरुषले मात्र गरेका हुन्छन त ? हामी किन पूर्वग्रही भएर सोची रहेका छौं ? हामीमा भएको विवेक किन उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं र किन बुझिरहेका छैनौ वास्तवमा जे छ त्यो ।
एक्काइसौं शताब्दीका मानिस हामी भनेर एकातिर गर्व गरिरहेका छौं भने अर्को तिर हाम्रो समुदायमा विध्यमान उहि पुरातन सोचमा किन परिवर्तन ल्याउन सकिरहेका छैनौं । हामीलाई लाग्छ हामी धेरै अगाडि बढेका छौं तर कुनै यस्ता घटनाहरु पनि हामी सामु आइरहन्छन् जसले हामीलाई एक्काईसौं शताब्दीतिर होइन ढुङ्गे युगतिर धकेलीरहेको महसुस हुन्छ । विभीन्न बहानामा त्यस्ता घटनाहरु सुनिरहेका हुन्छौं र नजिकबाट नियालीरहेका र छामी रहेका समेत हुन्छौं । चाहेर वा नचाहेर हामी यस्ता घटनालाई कम गर्न सकि रहेका छैनौं ।
हामी कहाँ हुने यस्ता लाखौं महिला हिंसाका घटनाहरुलाई नगदे बाली बनाएर खेती गर्ने संघ संस्था धेरै छन् । महिला हिंसाका नाममा सहायता पुर्याउने हेतुले खुलेका यस्ता हजारौं गैर सरकारी संस्थाहरुले स्वदेशी तथा विदेशी भूमिबाट सहयोग जुटाएर महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि कार्य गरिरहेका छन् । तथापि महिला हिंसाका घटनाहरु भने घट्नुको साटो झन झन आधुनिक र वैज्ञानिक तवर विकसित भईरहेका र हुदै गरेका घटनाहरु बाहिर आइरहेका छन् ।
हामी जति सुकै आधुनिकता र परिवर्तनका कुरा गरेर गफ हाँके पनि हामी केहि यस्ता घटनासँग जोडिएर हाम्रो समुदाय वा हामी आफैलाई समेत पछाडि धकेलिरहेका छौं जसका कारण महिला हिंसाको अवस्था हामी सामु जहाँको त्यही जस्ताको त्यस्तै नै छ । कुनै यस्तो र यति उपलब्धि हात लागेको छ भनेर गर्व गर्ने ठाउँ छैन ।
महिला हिंसा भनेको सामान्य अर्थमा महिलाको यो वा त्यो बाहानामा उसको मानव अधिकार हनन् हुनु नै हो अथवा भनौं एक नागरिकले आफु नागरिक भएर पाउनु पर्ने अधिकारमा अरु कसैले कटौति गरी वा बाधा अबरोध खडा गरि उसको अधिकारको पालना गर्न दिदैन भने त्यो नै हिंसा हो । त्यस्ता हिंसाहरुमा पुरुष माथि हुने हिंसा होस वा महिला माथि हुने हिंसा दुबै खाले हने हुन्छ । पुरुष माथि हुने हिंसालाई पुरुष हिंसाको रुपमा र महिलाहरुमा हुने हिंसालाई महिला हिंसा रुपमा लिइन्छ । आखिर महिला माथि भए पनि वा पुरुष माथि भए पनि हिंसा आखिर हिंसा नै हो ।
मानव हुनुका नाताले मानवले आफ्ना अधिकार उपयोग गर्छन् । कसैले पनि यि अधिकार हरण गर्न पाउदैनन् । नेपालमा पनि मानव अधिकार र महिला हिंसा सम्बन्धि कार्यक्रमहरु नभएका होइनन् तर पनि महिला हिंसा कम गर्न सक्रियताका साथ यस्ता किसिमका घटनाहरु निर्मूल पार्न सकिएको परिस्थीती सृजना हुन सकेको छैन । नेपालमा महिला हिंसा कम गर्नको लागि नेपाल सरकार लगायत च्याउसरि गैरसरकारी संस्थाहरु लागिपरेका छन तापनि महिलाहरु महिलाबाट नै हिंसा बेहोर्न बाध्य छन् ।
हुनत नेपालमा चालचलन रिति रिवाज र यहाँको संस्कृतिको पनि केहि हदसम्म प्रभाव परेता पनि आखिर किन महिला नै बुज्दैनन् महिलाको व्यथा ? नेपाली समाज जति नयाँ युगमा प्रवेश गर्दै छ, त्यति नै आपराधिक घटनाका प्रकृतिहरु पनि क्रूर, अमानवीय तथा वैज्ञानिक प्रवृतिका देखिंदैछन् । समयसँगै विगत र आगतमा समाज द्रुत गतिले परिवर्तन भइरहेको छ । यो राम्रो पक्ष हो, तर त्यही सामाजिक परिवर्तनसँगै नेपाली समाजमा अनेक किसिमका विकृति र विसंगति पनि प्रवेश भइराखेका छन् जसमध्ये महिला हिंसा उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । यो तीतो यथार्थ हाम्रो समाजसँग छ ।
हामी के सोच्छौं भने महिला माथि हुने हिंसा केवल पुरुषले मात्रै गर्छ र त्यसको जिम्ममेवार पूरुष मात्रै हो तर त्यसो होईन । समाजमा देखिने तितो यथार्थ के हो भने सासुले बुहारीलाई कँजाउनै पर्ने नन्द आमाजु भएपछि भाउजु बुहारीलाई सताउनै पर्ने देवरानी जेठानी गाँड कोरकोर गर्नै पर्ने । किन बुझ्दैनन् महिलाका व्यथा महिलाले । सबै पुरुषले मात्रै बुझिदिनु पर्ने हो र त्यसो त नहुनु पर्ने हो तथापि भै राख्याछ । आफु पनि एक दिन बुहारी थिएँ मैले पाएको दुख मेरी बुहारीले पाउनु हुन्न मेरी छोरी पनि कसैकी बुहारी भएर जान्छे भनेर सासुहरुले किन नसोच्ने ? नन्द आमाजुले हामी नि कसैका बुहारी हुन्छौं वा छौं भाउजु बुहारी नि हामी जस्तै महिला हुन भनेर किन नसोच्ने ?
देवरानी जेठानीले हामी अलग अलग परिवारबाट एउटै परिवारमा आएका छौं हामी किन एक भएर नबस्ने हाम्रा उर्जालाई किन एकै ठाउँमा उपयोग नगर्ने भनेर किन सकारात्मक हुन नसक्ने ? कोहि पुरुषले एक छिन मिठो कुराकानी गरिदियो । जीवनका तितामीठा परिवेशलाई आत्मसाथ गरेर अङ्गाल्यो भन्दैमा एउटी महिलाको परिवार बिखण्डन गराउन एउटी महिला माथि सौता बनेर अर्की महिला जाने किन ? त्यो पुरुषलाई लत्याउन किन नसक्ने जसले आफु बिवाहित हुदाहुदै अर्की महिलालाई भित्र्याउन खोज्छ । यी सबै कुरा हामीले हाम्रो समाजमा देखिरहेकै र भोगीरहेका छौं तथापि यसको दोष भने पुरुषलाई दिन पछि परिरहेका छैनौं । के साँच्चै महिला हिंसामा पुरुष मात्र दोषी हुन त ?